ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း - ဗီဒီယိုက ချက်တင် ဖိလစ်ပိုင်
ပြောတဲ့ပရိုဂရမ်မှလုပ်ဂျော့ဘ်၊ ၊အစဉ်အဆက်ခံစားခဲ့ရပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်မည်။ သို့သော်ဤတစ်မှိုင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်း။"ငါမေတ္တာ၌ကျဆင်းသောအခါ ပထမဦးဆုံးကျင်းပခဲ့ငါ့လက်ညှိုးနှင့်မဟုတ်ဘူးသွားကြကုန်အံ့၊"ေျပာ ၊တနှစ်ဘောဝန်ထမ်းအဘယ်သူသည်မကြာသေး မွေးစားကလေးတစ်ဦး၊အသေးငယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မှသာအိန္ဒိယတွင်။ ယခုမှာအသက်အရွယ်၏တနှစ်နှင့်ကိုးလ၊ထိုသူငယ်၏အကြောင်းဖြစ်သောအားဖြင့်မိဘများထံမှသျှန္ပီးဂါအပေါက်တစ်ပေါက်အတွက်သူ၏စိတ်နှလုံး။ တြ မှာအမင္က်ဥ္းအစ်မများအတွက် ။"ငါအနည်းငယ်အမှုအရာသည်ငါ့အဘ၏သားသမီးများအတွက်မိမိတို့မွေးနေ့၌စက်တင်ဘာလအတွက်။ ရှိကလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ်အာရုံကိုဖမ်းမိသောကြောင့်သူကြီးပေါ်တွင်မုသာစကားကိုတစ်ခေါက်ခုတင်၊ထွက်၏ဂုံးချောဂုံး၏အသံ။ လာရောက်ကစားရန်သူ့ကိုနှင့်အတူ၊သူဖွင့်ချိတ်၊ငါခံစားရအချိန်တွင်ချစ်ခင်စုံမက်၏။ သို့သော်၊ထိုအချိန်မှာ၊ကျွန်မမထင်ခဲ့ဘူးချမှတ်၊"ေျပာ ၊အဘယ်သူသည်မှာမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ် ။ နောက်တလအကြာ၊ အခုမိဘမဲ့ဂေ။ ရဲ့မျက်နှာခဲ့သူ့ကိုသရဲခြောက်များအတွက်ရက်ပေါင်း။ သူသင်ယူနေစဉ်ကြောင်းများစွာသောအခြားကလေးအမွေးတစ်မိသားစုမပါဘဲ၊သူယူ ။"ကျနော်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ လိမ့်မည်ငါ့သား။ ငါရှိသည်အမြဲလိုခငျြချမှတ်ငယ်ငယ်ကတည်းကငါမှာဖတ် ႏကြောင်းကြင်ဖော်မဲ့မိဘများချမှတ်။ ဒီတော့ကျွန်တော်ထင်၊မအဘယ်ကြောင့်?"သူမကပြောပါတယ်။ သို့သော်ကားလမ်းအရှေ့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူအတားအဆီး။ ပထမဦးဆုံးမှာ၊သူ၏မိဘများငြင်းပထမဦးဆုံးသူ့ကိုမေးဖို့လက်ထပ်။ မှာအချိန်၊မိဘဏာပိုင္မ်ားကတရားစြဲဆိုနိုင်ခွင့်မပြုတစ်ကိုယ်ရေယောက်ျားမှချမှတ်ဟိခရစ်ယာန်ဆန့်ကျင်လူပ်ိဳ-မိဘကမွေးစား။ ေလ အခုမိဘမဲ့ဂေဟာနှင့်ကြိုးစားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့အအစ်မ။ ဒီဇင်ဘာလကတည်းကပါ၊ကလေးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးအခြားလုပ္ထားေသာသျှန္အရာ၊ပြေးခြင်းအားဖြင့်အဆိုပါခရစ်ယာန်သာသနာပြု၏။ မတ်လအတွက်၊ ခဲ့သည်အသိပေးအကြောင်းသင့်ကလေးကြီးအတွက်ယခုဒေ။"တစ်ပတ်အကြာမှာသိလိုက်ရတာက ဆဲသာသျှန္ကြပြီးပေးရန်စီစဉ်သူ့ကိုမွေးစားဘို့။"ငါမေးမြန်းရာဦးစီးဌာနအမျိုးသမီးနှင့်သားသမီးရဲ့ဌာနပေးပို့များအပြားအီးမေးလ်အ ။ ငါသည်စောဒကကိုအ တြင္။ ဂန္ဒီပြောဖို့ကျွန်တော့်ဖုန်းပေါ်မှာပြောခဲ့ရာဗဟိုအမွေးအရင်းအမြစ်(ไทย)အတူအလုပ်လုပ်ရန်သျှန္င့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မဤကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ရန် ပြဿနာများ။ ပြီးနောက်ငါ၏တိုင်ကြား၊ ခဲ့ဖို့အမိန့်လွှဲပြောင်း ၊နောက်ထပ်မွေးစားအေဂျင်၊အသျှန္၊ ပာသည္။ ရှိပါတယ်၊သူလည်းတွေ့ရကြောင်းအရာရှိအံ့အားခဲ့ကြကြောင်းသူအခိုင်အမာအပေါ်ချမှတ်ကလေးတစ်ဦးအခါကထူးခြားသောနှင့်လူ။ သို့သော်ထိုသို့မကြီးသြဂုတ်လသည်အထိအကြောင်းအတင်းလှည့်။ ကြိုတင်ဒီရန်၊မိဘများကိုတောင်းဆိုကြောင်းအလေးဖြစ်ရမည်တွင်မှဥပဒေရေးရာအသက်မွေးစားခံရ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်။ နိုင်ခဲ့သည်ချမှတ် ။"ရက်အနည်းငယ်အတွင်း၊ငါသည်အပြီးစီးအားလုံးစာချုပ်နှင့်အမှာ၏အဆုံးအလုပ္၊ သြားေမိဘကြည့်ဖို့ ၊ဘယ်မှာသင်ပေးသူမှဆောင်ခဲ့ကြ၏စေသင့်ပါသည်ခင္ဗ်ာ။ ကံမကောင်းစွာ၊အဆိုပါအဖြဲ အကွာအဝေး။ သူတို့ဆွဲဆောင်စည်းရုံးဖို့ကြိုးစားခဲ့ၽြန္ုပ္၏ချမှတ်ရန်နောက်ထပ်ကလေး၊ကြောက်ရွံ့သောမိဘ၊သူပြောသောအမွတ္မိန်းကလေးလက်ထပ်မယ်လို့ကျွန်တော့်အခါအရာအားလုံးပျက်ကွက်၊ရန်ဆက်လက်နှောင့်နှေးအမွေး။ ငါထပ်မေးအ နှင့်အ ။ အခြေခံအားဖြင့်၊အစိုးရစေလွှတ်ဖို့တစ်ဦးအမိန့်ကြော်ငြာစာ ပြည်နယ်အစိုးရ၊ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ၊ကြောင့်တိုးမြှင့်ဖိအား၊ဒီဇင်ဘာလမှာကျွန်မလက်ခံရရှိအီးမေးလ်အကြှနျုပျကိုတောငျးကိုရောက်စေဖို့ အိမ်ဇန်နဝါရီလထဲမှာ၊"ဟုသူကပြောပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကပြီးသားကျော်၊ အတူအိမ်မှာမိမိသားကို၊အဘယ်သူသည်အသစ်တစ်ခုကိုအမည်(ကွယ်ပျောက်)၊နှင့်သူ့မိဘ၊သူအခုအလုံအလောက်မရသူတို့ရဲ့အသစ်။ တဖြည်းဖြည်းပုံမှန်တောင်းဆိုမှုများများအတွက်တိုက်ရိုက်ကလေးတင်ဖို့ရောက်လာသာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်စမ်းချောင်း၏ဆွေမျိုးသားချင်းများ၊ဒါပေမယ့်လည်းဖန်တီးရန်ပုံသေနည်းပြောင်းလဲရန်အတွက်အနှီးကိုထိန်းညှိဖို့အစာအာဟာရနှင့်အမွေးမြူရေးရာသီ။"ငါရည်ညွှန်းဖို့သူ့ကိုအထူးကုသူပြောတဲ့အပေါက်အတွက်သူ၏စိတ်နှလုံးကိုမလိုအပ်စေခြင်းငှါ၊ချက်ချင်း။"ဘယ်လောက်ဝေးပါဘူးဂါသွား၊ကျနော်ဖတ်သင့်ကြောင်းနှင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူတိုင်ပင်။ ငါမသိတဲ့ငါ့သားထိကြီးထွားမည်စိတ်ပိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပေမယ့်မတူဘဲသူ့မိဘများက၊ငါအရှုံးမပေးချင်ဘူး။ ဆရာဝန်က ပယ်ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်ဆိုရင်သူရဲ့ပတ်ပတ်လည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊အတွက်ရုံးအဆောက်အဦရှိအငယ်တန်း၊အဘယ်မှာသိမ်းထားချင်။ ကြ ငါသည်လည်းမွေးစားထားခဲ့သည်ရက်အနည်းငယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နေဆဲလိုအပ်သော။ အကြှနျုပျ၏အချိန်ဇယားသို့ကိုက်၊"ဟုသူကပြောပါတယ်။
မိန်းကလေးများ ထိုင္း-ပိုပြီးပျော်စရာကို။ ဖိလစ်ပိုင်
ထုိင္းသိရသည်ဝေးနေဖြင့်လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတွင်အာရှင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ေသာရှိသည်လိင်တူ ဒါပေမယ့်လည်းရှာဖွေဖို့ရည်းစားနှင့်ဇနီး။ တချိန်တည်းမှာဖိလစ်ပိုင်'ဂုဏ်သတင်းအဖြစ်ပရဒိသုအ ခဲ့တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအပြင်၊အလားတူအရေအတွက်၏ခရီးရောက်ရှိမှာအနီနှင့်အဘူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ ဒါဟာရဲ့အချိန်ခန့်ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့နှစ်နိုင်ငံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကြီးသောပျော်စရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးသို့မဟုတ်ပိုပြီးတိကျတဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဘယ်သူပိုကောင်း- မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်ထိုင်းမိန်းကလေးများ။ ခံရသူတစ်ဦးဘဝအတွက်ဘန်ကောက်နှင့်မှန်မှန်သွားရောက်ကာဖိလစ်ပိုင်ငါစေခြင်းငှါအနိုင်ပေးအချို့နှင့်အတူအထွေထွေလေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၏၊ဒါပေမယ့်သင်တန်းကအဆင်ပြေမယ့်လျှင်သင်ကွဲပြားခြားနားသောထင်မြင်ယူဆချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဤပို့စ်မဟုတ်ပါကိုပေးဖို့ကြိုးစားနေအတိအကျအဖြေတွင်သူကောင်း(စေခြင်းငှါသော်လည်းပေါ်လာလျှင်ဒါကြောင့်သင်အောက်ကိုဆင်းဖို့ဒီပို့စ်ရဲ့အဆုံးကို)၊ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲတစ်ဦးကောင်းသောမြေများအတွက်ဆွေးနွေးအတွက်မှတ်ချက်များအပိုင်း။ ဒီတော့ဒီမှာကြှနျုပျတို့သညျသှား၊ဒီအကြားနှိုင်းယှဉ်ပါ မိန်းကလေးများနှင့်ထိုင်းမိန်းကလေးများအပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားခြားနား။ သင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အချို့သောသူတို့ကိုပိုအရေးကြီးလျှင်အဓိကအားနှင့်အတူကိုင်တွယ် နေစဉ်အခြားသူများပိုပြီးအရေးအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ပထမဦးဆုံးအရာကဖြစ်နိုင်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုမှလာသည့်အခါအောင်နှိုင်းယှဉ်အကြားနှစ်နိုင်ငံအပိုင္ဆိုင္လိုသူရဲ့အကောင်းခါးဆစ်သောသူ၊ပိုပြီးလှပ။ ယခုဤသည်အမှန်တကယ်တစ်ဦးတိုက်ပွဲအပေါ်အမြင့်ဆုံးအဆင့်အဖြစ်မိန်းကလေးများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်နိုင်ငံတွေဟာကျွန်တော့်အမြင်အတွက်ဆယ်ကြိမ်အဖြစ်ဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်ဥပမာအားဖြင့်အမေရိကန်၊အင်္ဂလိပ်၊ပြင်သစ်သို့မဟုတ်သြစတြေးလျမိန်းကလေးများ။ ဒါပေမယ့်ငါပြောချင်သောပထမအကျော့အဝင်အ မိန်းကလေးများသူတို့ထအဖြစ်၊ပျမ်းမျှအားဖြင့်၊အနည်းငယ် ပိုကောင်းတင်ပါး၊ပိုကြီးရင်သားနှင့်အပိုလှပတဲ့။ အမျိုးသမီးလည်းအနိုင်ရတန္းထိုးကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာအတိတ်အတွက်(။ အီး။)။ ထိုင်းမိန်းကလေးများခံရဖို့လေ့(အပင်) အများပြည်သူအတွက်ထက် ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုလည်းအတော်လေးချိုနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ။ ဒါ့အပြင်၊သူတို့ရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားမည်သူမဆိုဆုံးရှုံးသူတို့မျက်နှာအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်ဆွေးနွေးမှုများအကြောင်းကိစ္စများနှင့်ပြဿနာများ၊သူတို့ပဲကြိုးစားပြသဖို့သူတို့ရဲ့ချိုမြိန်ဘက်ဖြစ်တာပဲ။ နှင့်ပင်ဖြစ်ဟန်ဆောင်ပျော်ရွှင်တဲ့အခါသူတို့ခံစားရ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ မိန်းကလေးများပိုပြီးတိုက်ရိုက်ဟာသူတို့ရဲ့စကားပြောနှင့်ပီ(ခရစ်ယာန်ၶဘာသာ)လည်းဖြစ်လေ့ၡမ်ားသောကြောင့်သူတို့ဘယ်လိုသိမှအပြုံးနှင့်အသုံးပြုမှုနှင့်၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းမိန်းကလေးများ။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အရေး၏အရသာနှင့်ငါမြင်ပြီးသူတို့ကိုနှစ်ခုစလုံး၏အပေါ်အလားတူအလွန်ကြီးစွာသောအဆင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဆွဲဆောင်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုတွေထဲက။ နေစဉ်သင့်ရဲ့ဖြစ်သူ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဓိကဘဏ္ဍာရေးစောင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်မျှော်လင့်ထားနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်(အနည်းဆုံးအတွက်ရေရှည်)၊ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည် ဒေသများငါမြင်တစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းအားသာချက်ကိုအတွက်ထိုင်းမိန်းကလေးငယ်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌သူတို့ဘယ်လိုဆက်ဆံပြီးသူတို့ရဲ့ရည်းစား။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ဘေးကင်းလုံခြုံသည်ဟုခံစားရသူတို့ပြုပါလိမ့်မယ်အရာအားလုံးကိုသင်ကောင်းကိုခံစားရစေပါနှင့်စောင့်ရှောက်မှုယူ၏အိမ်သူအိမ်သို့မဟုတ်ပင်သေးငယ်တဲ့အမှုအရာအနည်းငယ်သာလိုတဲ့အခါသင်သွားဖို့အစားအစာကိုတရားရုံးကိုပဲထိုင်ပြီးစေ၏ထိုင်းမိန်းကလေးလမ်းလျှောက်ဖို့ပတ်ဝန်းကျင်အစားအစာ၊သို့မဟုတ်အခါသင့်တိုက်ခန်းနှင့်အသိပေးခြင်းသင်မေ့လျော့တစ်ခုခု၏အခန်း၌သူမတိုင်ကြားမည်မဟုတ်ပေမယ့်ကိုယ့်သွားနဲ့သွားရ။ သို့မဟုတ်ငါသတိရသည့်အခါသွားရန်ကမ်းခြေနှင့်အတူ (ရုံး)အတွက်မိန်းကလေးတစ်ဦးင္တငါ့ကိုခဲ့သူတင်ပယ်အသဲအစောင်။ သူတို့အမှုအရာအနည်းငယ်သာအလုပ်၏အသက်ကိုပိုပြီးအဆင်ပြေသည်၊ပုံမှန်အားဖြင့်သင်စရာမလိုပြောပြထိုင်းမိန်းကလေးအကြောင်း-သူတို့ကပဲလုပ်မပါဘဲထိုသို့ပင်တောင်းဆိုသည်။ သငျသညျမလိုအပ်ပါဘူးအများကြီးအတွေ့အကြုံမှသိ မိန်းကလေးငယ်တွေအများကြီးပိုပြီးအသည်းအသန်အိပ်ရာအတွက်နဲ့မှဟန်ကြောင့်ပျော်မွေ့ရန်မိန်းကလေးများထက်သာ။ ဒါဟာမကြာခဏအတူခံစားရထိုင်းမိန်းကလေးငယ်များသာထိုသို့ပြုစေဖို့အမျိုးသားများပျော်ရွှင်နေချိန်တွင် ချင် ကိုယ့်အဖြစ်အများကြီးအဖြစ်။။။။ တချိန်တည်းမှာ၊တကယ့်မူတည်လျှင်သင်နှစ်သက်သောအရိုင်းအရေးယူ။ ဆိုရင်ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ် -သေချာသင်ကျိန်းသေအများကြီးပိုကောင်းများအတွက်တန်ဖိုးသင့်ငွေ။ သို့သော်လျှင်သင်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ၊နှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်အကြောင်းသိလိုစိတ်ရှိလိင်တူညီသောအမျိုးအစားလျော့ထက်အချိန်ကျော်တိုးပွါး၊ထိုအခါငါဟုတ်ဘဲငါရည်းစားမဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ညည်းညူခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်သုံးရက်ပတ်လုံးအသား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဒီအပိုင်းကအကြောင်းလိင်အတိုင်းတော့၊ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆုရှင်:အဓိကအကြောင်းပြချက်များအဘယ်ကြောင့်ပိုနှစ်သက်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်နှင့်အစားခရီးဦးမှန်မှန်ကြောင့်အစားအစာ။ ထိုင်းအစားအစာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အများကြီးပိုကောင်း၊၊ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးပိုပြီးကွဲပြားခြားနားထက်ဦးဘယ်မှာအရာအားလုံးကိုဟန်တူအစာရှောင်ခြင်းအစာ။ ကိုယ့်မေးတစ်မိန်းကလေးတစ်ဦးလျှင်သူမသည်ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်ကြောင့်အလွန်ရှားပါးကြောင်းသူမကပြောပါတယ်။ သေချာအောင်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊အလားတူနဲ့အတူထိုင်းမှာမိန်းကလေးများပထမဦးဆုံးဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့ကြောက်သောသင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်မူကားသင်တူးနောက်ထပ်နည်းနည်းနှင့်ကြကုန်အံ့ တကယ်တော့တစ်ခုခုလုပ်၊သူတို့ကျိန်းသေလုပ်တွေအများကြီးပိုကောင်းလေစားဖိုမှူးထက် ။ သူတို့ကလည်းခံစားရမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်အစာကျွေးဖို့အရမ်းသင်တို့အတွက်အဖြစ်၊ျပင္သစ္လူမ်ိဳးအစားအစာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အရေးအပါဆုံးအမှုအရာအတွက်အသက်။ ဒါဟာမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်သို့သွားကြဖို့အများကြီးအသေးစိတ်ကိုဒီနေရာမှာသောကြောင့်၊သံသယမရှိကြောင်းအဖေ့ကိုပြောရမ်းကြီးပိုကောင်းသွာတော့ဗမာထက်အလိုက္လာေဘူး၊သူတို့ကလည်းနားလည်အနောက်တိုင်းအတွေးတွေအများကြီးပိုကောင်း။ ဒါဟာညာဘက်အရပ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုရန်အကြောင်းပြချက်များအတွက်၊ဒါပေမယ့်ကိုယ့်မှာကြည့်ရှုဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်:ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူကိုချဉ်းကပ်ဖို့တစ်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်သာမန်စကားပြောထက်ကြောင့်နှင့်အတူထိုင်းမိန်းကလေး။ က်ေနာ္အခုစတင်ခင်ဗျားတို့ကိုတိုက်တွန်းသင့်ကြောင်းလေ့လာသင်ယူဒေသခံဘာသာစကားလျှင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်အစီအစဉ်ကိုဖူးမှအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များဖြစ်စေတိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ရန်အမှန်တကယ်နားလည်သဘောပေါက်ရန်သူတို့၏လမ်းစဉ်းစား၊ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဤအပိုင်းကအဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းနှင့်လွယ်ကူသောတစ်:အဘယ်သို့ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူထိုင်းမိန်းကလေးသည်သူမပေးနိုင်ပါတယ်သင်သူဌေးကဆက်ဆံရေးအတွက်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရစေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းတွေအောင်ြသင်အမှုအရာအကျင့်ကိုကျင့်နှင့်အောင်သင်ထင်သင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဆုံးဖြတ်ချက်၊ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကအဘယ်သူသည်သင်တို့အပေါ်မှာထိုင်သောယာဉ်မောင်းကိုဘီးနှင့်အဘယ်သို့ဆုံးဖြတ်ဖို့အလုပ်နှင့်အဘယ်အရပ်သို့သွား။ မကြားထားသောစာပိုဒ်တိုများ"အတက်"အတွက်ဖိလစ်ပိုင်နီးပါးအဖြစ်မကြာခဏသင်ပြုထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနှင့်အချို့သောအ ကြရန်ညွှန်ကြားရှင်းပြအတွက်သူတို့ဘာလိုချင်။ နောက်တဖန်အ၊ငါဤသည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှင့်ဆက်စပ်သောတူညီသောယဉ်ကျေးမှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများဗုဒ္ဓမွေးဖွားခဲ့သည်။ မိန်းကလေးများအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ချင်ဖျော်ဖြေမှုထက်ပိုမိန်းကလေးများအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိကြီး၏အခြေအဘယ်မှာငါနှင့်အတူတစ်သူသည်ထပ်တလဲလဲမေးတယ်"မင်းတို့အိုကေ။"အခါငါထားတိတ်ဆိတ်မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့။"ရွင္သစ္စာ"အတွက်ထိုင်းစာသားအဆိုလိုတယ်"ဘယ်တော့မှစိတ်"သို့မဟုတ်"ဒါကြောင့်အရေးမပါဘူး"နှင့်ပင်သော်လည်းတကယ့်အရေးပါအချို့သောအခြေအနေတဲ့ထိုင်းမလေးမကောင်းခံစားရကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်၊သူမသည်အလေ့မှတက်ကြည့်ရှုကြပြီးသံ ပြုကြသူအဘယ်သူမျှမပြဿနာနှင့်အတူ ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောလေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးနှင့်မျှော်လင့်ဖို့သူတို့ကိုအားပေးတိုက်တွန်းသို့မဟုတ်နှင့်အတူတက်လာ။ ထိုင်းမိန်းကလေးများယေဘုယျထင်ရပိုပျော်ရွှင်ပြီးအကောင်းမြင်နှင့်အလှည့်အတွက်ပေးအဖြစ်ယောက်ျားထက်ပို။ မိန်းကလေးများနှင့်ထို့ကြောင့်:ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကနှိုင်းယှဉ်အပေါ်သိပ်ကိုမြင့်မားတဲ့အဆင့်။ နှင့်လည်းစိတ်ကိုထားပါဒါကြောင့်သာမဟုတ်အပေါ်မူတည်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုအပေါ်ပေမယ့်သင်တို့ကိုလည်းအဘယ်အရာကိုသင်အမှန်တကယ်ရှာဖွေနေ:ပျော်စရာနှင့်လိင်နှင့်အတူအဖြစ်အများအပြားမိန်းကလေးငယ်များအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ ထို့နောက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအပိုကောင်းတဲ့နေရာသွားဖို့အခုအချိန်မှာနှင့်အတူအနည်းငယ်စျေးသက်သာစျေးနှုန်းနှင့်သိသိသာသာ ပြီးစိတ်အားထက်သန်အမျိုးသမီး။ သို့သော်၊လျှင်သင်ရှာကြသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အ-အခေါ်အဝေါ်မိတ်ဖက်ထိုအခါသင်သည်ငါ၏ထင်မြင်ချက်မျှဝေကြောင်းထိုင်းမိန်းကလေးရှိသည်အနည်းငယ်အနည်းငယ်ကျော်အားသာချက်များ ၏စည်းကမ်းချက်များ၌နေ့စဉ်အသက်တာနှင့်မည်သို့အတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆက်ဆံရေးသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ထိုအခါမူကားနောက်တဖန်အ၊၏သင်တန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဒီကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအခါတူရက်စွဲတစ်ခုဆွဲဆောင်မှုရုံး၏ကြင်နာဖြူဖြူကောင်မလေး၊သူမသည်အလွန်ကောင်းစွာအဖြစ်အထဲကနေလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအဘယ်သို့ငါ ရှင်းပြဒီမှာမျှော်လင့်သောအဖြစ်သူမ၏အသူဌေးက။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နှိုင်းယှဉ်၊နှင့်အ:ငါကြားရပြီသောကွာရှင်းမှုနှုန်းအကြားထိုင်းမိန်းကလေးများနှင့်အနောက်ပိုင်းလူကိုအတော်လေးမြင့်သော၊ပိုပြီးငါးဆယ်ကျော်။ ငါလည်းအချို့သောကိစ္စများအတွက်ရပ်ကွက်ခဲ့ကြထိုင်းမိန်းကလေးတစ်ဦး၊ရှိခြင်းနှင့်အတူကလေးတစ်ဦးအနောက်ပိုင်းလူ၊လက်ဝဲတယောက်တည်းသူ့ကိုနှင့်အတူဆိသွားသည်။ တစ်ဘယ်တော့မှထွက်ခွာမည်သူမဆိနှင့်ကပ်လျက်လူပင်လျှင်သည်မရှိအချစ်ဆိုပြီး(နေသမျှကာလပတ်လုံးသူသည္သူမ၏နှင့်အတူပိုက်ဆံအတွက်နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာ)။ သံခ်:တဦးတည်းအတွက်ပိုပြီးအ အားလုံးမှအဖြေများကိုနှင့်အတူ အထားနှင့်အတူရံဖန်ရံခါအသေးစားအတ္တ၊ငြူစူနှင့်ချိန်းကောက်။ ကန်ဆင်းအချို့ငွေသားတစ်ချိန်ကနေစဉ်၌အချို့သောပညာနှင့်သင်သစ္စာ။ (အများဆုံးအမှန်တကယ်ထက်ပိုကောင်းကိုသိရ။ရယူခြင်းဒါကြောင့်လောဘမဟာပုံမှန်အဖြူဟုတ္တယ္မများနှင့်သွန်းလောင်းသင်၏အိတ်ကပ်စာအုပ်ထဲက-ယူသူတို့ဘာပေးကြသည်။) ဖို့ပိုများပါတယ်လုပ်ရပ်နဲ့အတွေးအတန်ငယ်အနောက်တိုင်းအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်အတွက်ခြားနားချက်ကွာရှင်းသူတို့ကိုအကြားနှင့်ထိုင်း အမျိုးသမီး(ထိုင်းယဉ်ကျေးမှုအားလုံးအကြောင်းပါသောသမ္ပမပယ်ခြင်း၊ချမ်းသာကြွယ်သို့မဟုတ်ဆင်းရဲသားကို၊နှင့်အမေရိကန် ကိုဖတ်ရန်"စင်ကြယ်သော မှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးတူညီရှိသည်နှင့်ခြားနားချက်များ-ထိုင်းရှိဘားလားဟွတ်၏၊အတွက်ပေးဆောင်လိင် လည်းရှိသည်ဆိုလိုတယ်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကောင်းလိင်အတွက်။ ထိုင်းမိန်းကလေးလည်းကောင်းနဲ့အကောင်းမိန်းကလေး။ ကဲ့သို့တူညီ မိန်းကလေးအထူးတန်ဖိုးများခရစ်ယာန်မိသားစုသူတို့အကောင်းအမျိုးသမီးလည်း၊ထိုင်းနှင့်ဖီးလ်မည်၏စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးသူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းနှင့်မိသားစုကလွဲပြီးခဲ့သည့်သူများ၊ဒါကြောင့်နည်းလမ်းများနှစ်ဦးစလုံးတူညီသော။ ထိုင်းမိန်းကလေးများငါးဆယ်အဂၤလိပ္စ ဂၤလိပ္စလေးထိုင်းနှင့် ရှိသည်ထွားနှင့်ပိန်၊သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအဘို့အရှာဖွေနေအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအခြေစိုက်စခန်းအပေါ်သောသူသည်သူတို့ဖြည့်ဆည်းလျှင်၊ပိုပြီးဖတ်ပါ"အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေမဲ့ဒီ၊ဒါဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ကျနော်မကြာသေးမီကအတူတက်ချိုးဖဲ့ငါထိုင္းမယား၏တကျိပ်နှစ်(သူမ၏ရွေးချယ်မှု၊ဥစ္စာမဟုတ်)နှင့်ငါစဉ်းစားနေတာရင္းအလံကိုပစ်ခတ်၊ဒီအကူညီပေးခဲ့လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်။ ရှုပ်ထွေး။ ဒီပုံရသည်တကယ်မျက်နှာထိုင်းရေရှည်များအတွက် ဆက်ဆံရေး။ မဟုတ်အဘယ်သို့ငါရှာနေတာပါအဘို့၊ဒါပေမယ့်ဟေး။ ငါထင်သောအရာကိုသတိပြုမိရန်အရေးကြီးကြောင်းယဉ်ကျေးမှုကိုစျေး ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ပိုပြီးအရေးထက်ပထမဦးဆုံးအတွေး၊လူအသင့်ဖြစ်တက်ကြွစွာလိုပဲ။ ကျွန်တော်မှအကျိုးဖြစ်ခြင်းသာကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှု၊နှင့်ဖြစ်မည်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးနောက်သွား၊ထက်ဝက်လမ်းမှတဆင့်။ အဲဒီတုန်းကလူတွေအကြောင်းပြောလက်တင်အမေရိက။ ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူင့်ရောစပ်ဖို့အတွက်၊ယဉ်ကျေးမှုခံစားရလျော့နည်းတပါးကိုကျွန်တော်တို့(အထူးသဖြင့်အမေရိကန်မှတောင်ပိုင်းဥရောပ)။ ဒါပေမယ့်ဘယ်ခန့်မှန်း။ ပိုပြီးဖတ်ပါ"
အဲဒီမကြော်ငြာများနေရာတွင်အမည်မသိအပြုအမူအခြေစိုက်စခန်းမြင်ချင် ပြီးနောက်ဆိုင်း၏။ အားဖြင့်ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ဒီကြော်ငြာ(ဖတ်ဝဲမှယာနှင့်အောက်ဆုံးမှထိပ်တန်းကနေ):သင်အနေနဲ့ကြော်ငြာထုတ်ဝေသူများထဲမှတစ်ခုနှင့်အတူကြော်ငြာအကောင့်၊အတိုင်းအောက်ပါလင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အကြောင်းကြော်ငြာ။ အဘယ်ပြည်၊အဘယ်အဇုန္၊နှင့်အဘယ်သို့သင့်ရဲ့လေ့လာချက်သို့မဟုတ်အလုပ်? သင်ဆုံးဖြတ်မနိုင်လျှင်အရာ၏အစိတ်အပိုင်းလာက၊ဤပြည်၌ထိုစမ်းသပ်မှုယူရန်။ အနက်။ ဒီတစ်ခါလည်းငါအလိုမာက္သို့မဟုတ်တောင်အမေရိကတိုက်၊အင်္ဂလန်၊စပိန်၊ပြင်သစ်၊အီတလီ၊နယ်သာလန်။ ဒါပေမယ့်မဆင်းရဲသူအတွက်အိန္ဒိယ။ ငါ၌ရှိ၏။ ကျွန်တော်ထင်သည်မှားယွင်းနေဘာမှမရှိဘူးရဲ့အတူအာဖရိက၊ဒါပေမယ့်ပင်အတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စား။ ကြောင့်အသက်ဝိညာဉ်၊နှင့်၊ဟုတ်ပါတယ်၊ယဉ်ကျေးမှု။ ငါအလိုရှိဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားအဆိုပါယဉ်ကျေးမှုအလုံးစုံတို့အဘို့ဂျပန် ၊ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြိုက်၏သဘောသဘာဝ။
သင်သည်အစဉ်အဟောင်းနွမ်းအိန္ဒိယဝတ်၊မိန်းကလေး? အိန္ဒိယဝတ်ပါဝင်ပါသည်တစ်ခု၏ထိပ်နှင့်အဝါကဒ္။ သိအိန္ဒိယဖက်ရှင်နှင့်လှပသောကအိန္ဒိယမိန်းကလေးများအတွက်တရားဝင်အဝတ္အထည္မ်ား။ ဒီအိန္ဒိယမိန်းကလေးများကြည့်ရှုရန်ဒီနေရာကိုနောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းအတွက်အိန္ဒိယဖက်ရှင်စတိုင်။ သူမ၏ဝတ်တက်များအပြားတွင်ထိပ်နှင့်ပေါင်းစပ်နှင့်အတူသူတို့ကိုအဝတ်မော်ဒယ်များ။ သုံးချင်ပါဘူးအသီးအသီး။ အလှဆင်လှပသောကအိန္ဒိယမိန်းကလေးနှင့်အတူလုံလောက်တဲ့အိန္ဒိယ၏လက်ဝတ်ရတနာနှင့်တစ်တောက်တောက်နှုတ်ခမ်း။ ပျော်စရာရှိနှင့်အတူဤကျားဂိမ်း။
မိန်းကလေးအချစ်မြင်း၊ယောက်ျားလေးများကစားဘောလုံးအားဖြင့်တစ်ဦးအုပ်ချုပ်သောဆယ်စုနှစ်များစွာရှိပြီထပ်၌လူမှုရေးနှင့်-ယဉ်ကျေးမှုမက၊ဘာသာရေး၊အခင္းအက်င္း။ ရာစုနှစ်။ ဆရာ စိဖိတ်၊ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်၊ဒီ"မြင်းမိန်းကလေးများ"၊ချဉ်းကပ်မှုများ၏ခေါင်းစဉ်အမျိုးသမီးများနှင့်မြင်းအရွယ်ရောက်သူအဖြစ်၊ဒါပေမယ့်နှင့်အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲပြားခြားနားမှု။ အမျိုးသမီးမှမြင်းကို၊အရာဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်လာအုပ်တစ်အုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဓာတ္ပံုစီးရီး၊"အမျိုးသမီး၏ဖင်လန်နိုင်ငံ"၊ထွန်းလင်းသောမှော်အကြားဆက်သွယ်တစ်ဦးမှာမြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးအသွင်အပြင်တစ်ခုချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအစဉ်အဆက်-ကြီးထွားလာပေမယ့်နက်ရှိုင်းသောရိုသေလေးစားမှုနှင့်အခြားလူများအဘို့။ ကျွန်မတို့ပြောသည့်အကြောင်းအဘယ်သူ၏အသက်အရွယ်ပန်းချီပြီးသားထုတ်ဝေခဲ့ဥရောပနှင့်အာရှရှိ၊ထက်ကျော်လွန်တိရစ္ဆာန်ကျက်၊အနည်းငယ်သောမြင်း၊နှင့်နီးပါးထိုးစစ်သီးႏွံေအကြားဆက်ဆံရေးအမျိုးသမီးနှင့်မြင်း။ ကိုသင်တို့အဘယ်သို့ထင်ကြဘူးအတွက်ခြားနားချက်အကြားဆက်ဆံရေးမျိုးသမီးများနှင့်မြင်းများနှင့်အမျိုးသားများနှင့်မြင်း? ကျွန်မသေချာမရယ်ရှိပါတယ်သေချာပေါက်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်။ နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးနိုင်လွန်နီးကပ်သောဆက်ဆံရေးနှင့်အတူမြင်း။ တဦးကိုလက်တွင်၊ဒါကြောင့်အထင်ကရပုံရိပ်တစ်ခု၏လုံးသေနတ်၊သူသာစစ်မှန်သောအဖော်တို့သည်မြင်းကိုစီး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ရှိပါတယ်၊ဥပမာအားဖြင့်၊ ရှိပါတယ်အများအပြားငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးများကနေတစ်ခြို့သောအသက်အရွယ်ယုံကြည်ကြောင်းတည်းသာနားလည်သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးမြင်း။ ငါနှင့်အတူသုံးငယ်အစ်မနှင့်အဘယ်ကြောင့်ငါအမြဲခွင့်ပြုမိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးဖြစ်ရိုက်၊ဤစီမံကိန်းငါမျှဝေဤမိန်းမ၊ဤထူးဆန်းဆန်းကမ္ဘာနှင့်အတူ၊အတိအကျဤအခြားသတ္တဝါ။ အဖြစ်မကြာမီစီမံကိန်း၊အကောင်အထည်။ သင်ကိုယ်ပိုင်တင်ပြချက်အပေါ်ဤအကြောင်း။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပိတ္ဆိုသောကြောင့်၊မည်သည့်ကိစ္စများတွင်၊အများကြီးရှိပါတယ်ကျေနပ်သားသမီးရဲ့အလိုဆန္ဒ။ ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်၊အစဉ်မပြတ်ငါလိုခငျြစီးမြင်း၊ဒါပေမယ့်မရဘူး။ တူကီးမ်ား၊ယူသင်ခန်းစာများထိုအခါနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတယ်။ ငါစတင်ရန်ဘယ်လိုအကြောင်းစဉ်းစားသောမြင်းအဖြစ်အသုံးပြုအတွက်သင်္ကေတအနုပညာ၊ငါအကြောင်းအများကြီးကိုဖတ်ရှုဘယ်မြင်းကစားနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍအတွက်၊တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးဘယ်လို၊ဘယ်လိုလူတွေကိုသင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုဤသတ္တဝါ။ မြင်းဖြစ်ဟန်တူတစ်ခုခုအမှန်၊လူတစ်ဦး၊အဟပ်၏၊များသောအားဖြင့်မသုံးစွဲခွင့်ရှိပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပင်၊အမှန်ဖြစ်လာပြီးမတည်မငြိမ်၊လူအပေါင်းတို့သည်အချိန် ပို ၊လူကိုလျစ်လျူရှုနှင့်အတူတိရစ္ဆာန်။ ပြပွဲဓာတ်ပုံများ၏အမျိုးသမီးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏လက်ရှိမြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်အတူမော်ဒယ်များ။ ပထမဦးဆုံးအဘို့အဓာတ်ပုံများ၊ငါသည်လည်းဟန်၊ဒါပေမယ့်မအလွန်လက်တွေ့ကျတဲ့၊ဒါကြောင့်ငါသောသူအမျိုးသမီးအများစုကိုဖြုန်းသူတို့၏အသက်တာနှင့်အတူမြင်းများအကြောင်းသူတို့သိနှင့်ပတ်သက်။ အများကြီးငါဓါတ်ပုံများခေါ်ဆောင်သွားမယ့်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ထူးဆန်းသောလူငယ်အမျိုးသမီးအဘို့၊ဥပမာ၊အယူသည်မြင်းမီသူတို့လမ်းလျှောက်။ အလုပ်လုပ်နှင့်အတူမြင်းများအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာကိုမှကျွန်မသိမှမြင်းအိမ်ပြန်။ ဖင်လန်အတွက်၊ကျွန်တော်တို့မြင်ရရန်တစ်ဝါသနာအဖြစ်၊ငါတို့သည်သင်တို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ မဆိုအမှု၌၊ငါလာသောအလွန်နီးကပ်နှင့်အတူ၊နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လေးစားအကြားဆက်ဆံရေးအမျိုးသမီး(နှင့်ယောက်ျား)နှင့်မြင်း၊အတူတူသူတို့ကြီးပြင်းလာနှင့်အသီးအသီးအခြားထံမှသင်ယူ။ ဒါဟာအလွန်ခက်ခဲကြောင်းအပေါ်သတ္မွတ္အ။ အနည်းငယ်မြင်းဖြူသောဓါတ်ပုံကိုအိပ်ရာပေါ်အမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့အိမ်တော်၌အတူသူ၏ဇနီး။ ကျနော်တို့အခေါ် ဤသည်သန့်ရှင်းသောပုံရိပ်ကို။ သင် ၊အသေးစားမြင်းလည်းအမှန်ထောင်။ မယုံနိုင်လောက်အောင်သေးတယ်။ ငါအရမ်းကံကောင်းတာကကျွန်မဟာအခွင့်အလမ်းကိုအတူအလုပ်လုပ်ရန်မြင်းနိုင်အမိန့်အပေါ်လျက်အိပ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ဒီရန်အမျိုး ၊ဒါပေမယ့်တကယ်တော့၌ရှိများမှာ-ယဉ်ကျေးမှု၊အားဖြင့်ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးများနှင့်အတူအဘယ်သူရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိမြင်းဖု။ သောကြောင့်၊သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်အတွက်၊ကဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ဒါကြောင့်တစ်ဦး ၊တခါတရံကျနော်ရှာတွေ့နီးပါးထိုးစစ်အလမ်းအကြားချစ်ကြည်မိန်းကလေးများနှင့်မြင်းအတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆယ်ကျော်သက်အဆင့်၊အစအဦး၌၊အများအတွက်စိတ်ဝင်စားယောက်ျားလေးများနှင့်အတူ၊သို့မဟုတ်သင့်ပြင်းထန်သောလိင်။ ဒီအများကြီးပိုပြီးရှုပ်ထွေး။ အဲဒီစဉ်းစား၊ဒါပေမယ့်လည်းအလုပ်လုပ်ဘို့အသီးအသီးအခြား။ မြင်းများမှာအလွန်အမရမှလက်ခံသင်အဖြစ်သင်၊နှင့်၎င်းတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထံအလွန်နှစ်သိမ့်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊သူတို့ကလည်းလိုအပ်သူလူ နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်လူငယ်အမျိုးသမီးထွက်ကြိုးစားဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်မှုရာထူး။ အလုပ်လုပ်နှင့်အတူဤကြီးမားသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကို၊ သောသူတို့အဘို့ဝင်ငွေအသက်ရှင်နေထိုင်၊ဒါကြောင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့မည္၊မမြင်ရတဲ့အဖြစ်မြင်း။
သွားရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်ဒီဆိုက်၊သငျသညျသဘောတူရန်ကွတ်ကီးများအသုံးပြုမှုကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုမှုစာရင်းဇယားများအရ၊ဒါကြောင့်သင်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်ကြော်ငြာများမှဆက်စပ်သောသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွား၊လူမှု၏အင်္ဂါရပ်များပလက်ဖောင်း။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံမှလင့်များ။ ကၽြန္ေနှိပ်ပါ"နောက်တစ်ခု"ငါနှင့်အတူသဘောတူသောလင့်ခ်အတွက်အသုံးပြုမှု၏စည်းကမ်းချက်များ။
နောက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟုခေါ် ၊ကျွန်တော်ချက်ချင်းသတိပြုမိကြောင်းဇာတ်လမ်းအဆင္အျကြီး၏အပြင်ဘက်တွင်ပုံမှန်အတိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူနှစ်ထပ်ကမ်ရှုခင်းပြတင်းပေါက်နှင့်စကားပြောဝင်းဒိုးအပေါ်ညာဘက်ခြမ်း။ ယနေ့သင်သာမြင်ပြတင်းပေါက်၏ ရဲ့ကမ်၊ဒါပေမယ့်သိသိသာသာချဲ့ထွင်။ အဆိုပါစာသားအလယ်ပြင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီ:ဤလမ်းသင်သည်သာတူဆက်သွယ်ပြောဆိုစကားနှင့်ဓာတ်ပုံများ။ သုံးစွဲဖို့ ၊သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ မတူဘဲအလားတူဝန်ဆောင်မှု၊သင့်ရဲ့ကျားမအပြောင်လိုအပ်သည်။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်ဖြစ်ပါသည်အင်အားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှပြုံး။ မပဲသဘောပေါက်ရန်ခံစားချက်:မီသင်ချိတ်ဆက်စိမ်း၊သင်တွေ့လိမ့်မည်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြု၊ကိုယ့်တစ်ချိန်က၊အစအဦးမှာအစည်းအဝေး။ ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိတာကဒီတစ်ခုလုံးစွမ်းဆောင်ရည်အရာဖြစ်ပါသည်၊အလွန်အမင်းစိတ်ဓာတ်။ လွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်ဖို့စတင်အပြုံး၊ပြီးတော့ကင်မရာချက်ချင်းခြုံက ။ ပေမယ့်မနေ့ကရဲ့လူကြိုက်များသည်စက်၊ရေကူးကန်သံုးျပဳသူမ်ားတူညီဖြစ်နေဆဲ: ဆဲထည့္ပါကိုရှာဖွေနေလူများအတွက်အဝတ်အချည်း ။ သိမ်းချို့ရေတ္ထုစာသားချက်တင်၊နဲ့လည်းကမ်းလှမ်းတဦးတည်းလျော့နည်းရုပ်သံလိုင်းထက်တူပြိုင်ဘက်များ ။ နိုင်ဆက်သွယ်ဖို့အသုံးပြုကီးဘုတ်၊သင်ဖို့အတင်းအဓမ္မပြုနှုတ်-ကံမကောင်းစွာ၊အများဆုံးအခြားအသုံးပြုသူများသာလိင်အင်္ဂါကိုပြသသောအပင်အတွက်နည်းနည်းလေးအပြောင်းအကြပ်ရေးမှူး။ အသာစစ်ဆေးအနည်းငယ်ကလည်း -စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကာကွယ်တားဆီး၊မရောက်သေးကနေဖြစ်နိုင်ကစား ။ ဤအတောအတွင်း၊အနည်းဆုံးတ"သတင္း"၏မသင့်လျော်သောအပြုအမူ။ အရာအတိအကျဘာပါဘူး။ လုပ်ကွက်ပုံမှန်တြကနေအသုံးပြု။ ကံမကောင်းသဖြင့်၊ကျမတို့မပြောနိုင်ဒီ၊မရှိသောကြောင့်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစာမျက်နှာ။ မရကြလျှင်၊သင်အဝတ်အချည်း သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်နှင့်သင်တန်ဖိုးလေးနက်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုပါသည်တစ်တစ်ဦးတစ်လဲလှယ်များအတွက်။ ပိုင်အမျိုးမျိုးကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူ။ သို့သော်၊ယခုအားဖြင့်၊သူတို့ထဲကအများစုဟာအမျိုးသားတွေ။ေများမိုဘိုင်း။ သို့သော်၊သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ကနေတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းရဲ့။ မှန်ကန်သောစာလုံးပေါင်းဟာ။ သင်မကြာခဏတွေ့မြင်သောစာလုံးပေါင်းနှင့်-ဒါပေမယ့်သူတို့မှားနေပါတယ်။ ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေတစ်သင့်အစဉ်အမြဲပိတ်ထား။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်၊သင်တို့အဘို့အဒါပေမယ့်အဘို့အသင်၏မျက်နှာ။ သည်နိုင်ရန်အတွက်အခြားအသုံးပြုသူမှအသိအမှတ်ပြုရန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏မျက်နှာ၊သူတို့တစ်ဦးကမ်။ ပြီးနောက်၊သင်ပိတ်ဖို့နိုင်သည့်ကင်မရာမှာမည်သည့်အချိန်။ ကျွန်တော်ကူညီနိုင်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအာမခံချက်မပေးနိုင်ပါသောအခြားအသုံးပြုသူများ၏မည်အတူထိတွေ့နေဖို့သင်အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်။ အများအားဖြင့်၊ဆက်စပ်ပြဿနာများပေါ်ပေါက်မှုကြောင့်ပြဿနာများနှင့်အတူသင့်ရဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်။ သို့သော်၊ဒီဖယ်၊သင်သည်လည်းဆက်သွယ် ထောက်ခံမှုအီးမေးလ်ကနေတဆင့်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊"ဂသုံးစွဲဖို့အကင်မရာနဲ့မိုက်"။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သောအကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုပါလိမ့်မယ်အတွက်အဓိကဗမာ။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊အကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း မဟုတ်သေး။ ပထမဦးဆုံးဖြစ်မျှဝေဖို့အတွေ့အကြုံနှင့်အခြားသူများနှင့်အတူ
ကျေးဇူးပြုပြီးကယ်မိန်းကလေးရဲ့အသက်။ သင့်အလှူတတ်၏အန္တရာယ်မှာမိန်းကလေးများအတွက်အိန္ဒိယကိုနိုင်ခြေများ၏လွတ်လပ်သော။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ပညာရေး၊မေတ္တာမိသားစုဘဝများအတွက်:တစ်ဦးလက်မှတစ်ဦးစွန့်ပစ်မိန်းကလေးအိန္ဒိယအတွက်။ ယခုဖောင်ကိုင်ဖခင်ကြီး။ အဖြေမိန်းကလေးရဲ့အသက်တာတွင်အိန္ဒိယသည်မလွန်တန်ဖိုးရှိသော။ သည်နှင့်အညီပညတ်တရား၊ဤစုမ်ား၊တွင်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်မိန်းကလေးများသည်မှဆင်းရဲသားမိသားစုများလုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ အိန္ဒိယကအပစ်မှတ်၏ဖောင်ကလေးများ၏ရွာ။ ကနေကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဖြစ်ဖို့နီးစပ်ကလေးများအတွက်လိုအပ်။ ယနေ့၊ရှိကွဲကျေးရွာတွင်အိန္ဒိယ၊ဘယ်အရပ်ကအများအပြားလူမှုစီမံကိန်းများအစပြု။ သူမ၏မိခင်နှင့်တူသောစိုက္၊သူမကသူမ၏စွန့်ပစ်သမီး။
ကြိုတင်မဲအတွက်ငါသတိပေးမော၏နှလုံးနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောငါ၏အထံမှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားစံ"ပြည်နယ်သောကျွန်း"နှင့်ရန်မရှိတိုက်ဆိုင်နှင့်အတူအတွေ့ကြုံများ၏ခရီး ၊မွန်း နှင့်အတူမွေ့လျော်။ အချက်အလက်အပေါ်အခြေခံပြီးကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ၊တစ်အများကြီးဆွေးနွေးခဲ့အတူအခြားနိုင်ငံခြားသားတွေကဘယ်သူတွေမှဆောင်ခဲ့ကြ ၊ ရှိသည်သောသူအချို့အတွေ့အကြုံ၏လက္ခေႏွာင္းတူ။ တကယ်တော့မမျှော်လင့်လှပသောအပြုံးဒေသခံသင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကြားရလစ္ပိုင္အများဆုံး လူမျိုးအတွက်။ ထိုသို့ဟုတ်မှန်င်။ သူတို့ကအမြဲတမ်းပြုံးနေ၊စိတ်မကောင်းပါဘူးလျှင်ပင်၊သင် သူတို့အပေါ်တစ်ဦးခြေထောက်တက်ဖို့ကြိုးစားကျေးဇူးပြုပြီး ၊နွားကဲ့သို့အိန္ဒိယအတွက်။ ဒါဟာတကယ်ကြီးမြတ်သည့်အခါသူတို့လာခေတ္တအနားယူရန်အနေဖြင့်"အက်ဆစ်မင္း"ရာက္ဖို။ ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်၊ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောသောအခါသင်တို့ကိုတိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်။ ကျိန်းသေပိုပြီးသာယာမှဖြတ်သွားအပြုံးနှင့်နှုတ်စိမ်း၊အစားထက်အပြန်အလှန်။ ဒါပေမယ့်၊ထုံးစံအတိုင်း၊တစ်ဦးရှိပါတယ်သိ။ နောက်ကွယ်မှအပြုံးဖုံးကွယ်သောစိတ်နှင့်မိုက်(အကြွင်းမဲ့စွမ်းနိုင်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဖို့)။ တစ္ခုခုအနက်ဖြစ်ပျက်သို့မဟုတ်အရေးပေါ်လိုအပ်မှလှည့်ရန်အဆိုပါဦးနှောက်ယူဆတာဝန်ကိစ္စများတွင်ဖိလစ်ပိုင်အသုံးမကျ။ တကယ်တော့:အကြားလစ္ပိုင္အများကြီးတဲနိုင်ငံအတွင်းနှင့်အတူတစ်လုံးကိုအားလုံးအမြိုးမြိုးရပ်တည်(သူတို့ဖြစ်ကြသည်အမျိုးသမီး-ယောက်ျားလေးများ၊သူတို့သည်တူညီသောမုန်လာဥနီ)အမျိုးသားတွေ၊လိင်၊နှင့်အခြားအ - သူယဇ်မိမိမြည်းအတွက်ပိုငျးမှာထညျ့။ အထင်အတိုင်းဆယ်ဘို့တွင်မနီလာလှည့်။ လမ်း ကျိကျိနှင့်အတူနှင်း အလရိ။ သူတို့ နှင့် ၊ပစၥဳမှာသာမန်ယောက်ျားတွေနှင့်သက်သက်အလိမ်အမြည်း။ ကြည့်လို့ရှုပ်တယ်။ အသုံးပြုရရန်မဖြစ်နိုင်။ အမော်ဒယ်၏အပြုအမူထိရောက်စွာညျ့အတွက် အသေးစားလစ္ပိုင္ကလေးဘဝကတည်းကချဉ်။ ဒေသခံရုပ်သံအမြဲတမ်းလိမ်စီးရီး၊အရာအတွက်အဓိက"ဒီႏွစ္"အန္တမေတ္တာ၌ကျရောက်နှင့်အတူကောင်လေးချောမောသူတို့ချစ်။ ရေနွေးငွေ့ကနေကြုံတွေ့နေကြရသည်သူတစ်ပါး၏၊တားမြစ်မိဘ၊ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိသမျှတို့သည်ထိုစက်ဝိုင်း၏ငရဲနဲ့အတူတူနေဖို့။ ဟုတ်ပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမပြသဘဲအနမ်းခြင်း၊လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူရှန်ပိန်တစ်ခွက်လောက်။ ဆိုတဲ့ဒီအရိပ်အဖြစ်အစေခံ။ တကယ်တော့:ဖိလစ်ပိုင်အချိန်အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်နှောင့်နှေး၏မရှိခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်။ နှောင့်နှေး၏နှစ်နာရီမစဉ်းစားသည်ထွက်၏။ ဒါကြောင့်၊သငျသညျရှေ့ရောက်လာဆိုက်မှာ၊သူ့မိတ်ဆွေ၊"လာတွင်ဖိလစ်ပိုင်အချိန်သို့မဟုတ်အပေါ်တစ်ဦးပုံမှန်"တကယ်တော့:အဖိလစ်ပိုင် မယုံကြည်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာမနှောင့်ယှက်နှင့်အတူဘယ်လိုအချင်းယောက်ျားနှင့်မယားမြင်စွာပြောင်းအသီးအသီးအခြား။ လုံးဝပုံမှန်အခြေအနေ၊အခါလူငယ်တစ်ဦးကမိန်းကလေးချွတ်ပြသသူမ၏ရည်းစားနှင့်ဆေးတည်ငြိမ်ေျပာသူရဲ့လက်ထပ်။ အဘယ်သို့ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အသုံးပြုခြင်းထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာခြင်းအတွက်ထောင်။ တကယ်တော့:အဆန်များအတွက်နံနက်စာ၊နေ့လယ်စာ၊ညစာစား၊နှင့်အချိုပွဲအဘို့၊ဟုတ်ကဲ့။ ဒေသခံအချစ်အစားအစာကိုစားဆန်၊။ သောကြောင့်အထိအ"လူး"အထူးခြေထောက်နှင့်ကျယ်ပြန့်ခါးပတ်နှင့်အတူဗိုက်။ လျှင်တစ်စုံတစ်ဦးကအပေါ်သွားကြဖို့အစားအစာ၊ပဲစာစားခြင်းရပ်တန့်ဆန်၊သူတို့အဘို့အကြောင်းအမင်းအဖြစ်ဆိုး။ ကြာဒီကုန်အစားအသောက်တစ်နေ့မှာအစားအသောက်ထုတ်ကုန်ဝက်အူချောင်း၊မုန်နှင့်စည်သွတ်ကုန်ပစ္စည်းများ။ တကယ်တော့:အဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအကြီးဆုံးဈေးဝယ်စင်တာအာရှတိုက်မှာ။ သို့သော်၊အလွန်အအထင်ကြီးအဆောက်အဦနှင့်အတူ-အဆုံးသတ်ရေးဘယ်တော့မှ ၏ဆိုင်များနှင့်ကိုစ။ ဧည့်သည်များနှင့်ဒေသခံမာနထောင်လွှား၊ပထမဦးဆုံးအရာ၊ခဲခရီးစဉ်အပေါ်၎င်း၏ပပါ။ ဒါဟာ၏ဤအမျိုး။ တကယ်တော့:လိင်ရီးစဉ်ကို၊သို့မဟုတ်ဘယ်လိုအောင်မြင်စွာလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတူအနီရောင်အလငျးကိုခရိုင်အရပ်ရပ်မေတ္တာသည်မွေးဖွား"လက်ထပ်ထိမ်းမြား"(ကောင်းကင်ဘုံ၌)။ တိုင်း အိပ်မက်လက်ထပ်ဖို့တစ်ဦး၊နိုင်ငံခြားသားနှင့်အသက်အရွယ်နှင့်အသွင်အပြင်၏ထိုအရာဝတ္ထုမကယ်။ အမှတ်တံဆိပ်အများအားဖြင့်ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးများနှင့်အတူဥရောပတိုက်သားနှစ်။ စကားမစပ်၊အများကြီးစုံတွဲများပခ်က္ရွိသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အနွယ်။ဒီအလစ္ပိုင္ႏ။။။။။အချက်အလက်:သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဇီ၊မစားပါနဲ့အနီးဖိလစ္ပိုင္။ သူတို့ ။ ကျယ်လောင်။ အတူခံစား။ နပ္အား။ ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ငါသည်အမျက်ဒီလုပ်ဆောင်ချက်၊တွေးဂုဏ်ဆးထားပါပဲ။ နောက်ပိုင်းမှကပြွီးအသက်တာနှင့်အတူပြည်တွင်း၊ လျော့နည်းသွားပေမယ့်အသီးအသီးအခုထိထွက်ရုရှားဖျာ။ ခက်ခဲရဖို့ရန်အသုံးပြုသည်။ လမ်းဖြင့်၊ကျွန်တော်ပင်စကားလက်ဆုံနှင့်အတူတစ်ဒီအတွက်ကြောင့်၊ငါဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြောင်းရှင်းပြတယ်(ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်နှင့်ရိုင်းစိုင်း)။ သူမအရမ်းအံ့သြသွားနှင့်ရှင်းပြပုံလေး၊ အဲကနေဆေးပညာအမြင်မဖြစ်နိုင်ဘူးစောင့်ရှောက်ရန်အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့များ၊ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ မသိရပါဘူးလျှင်ဒီကိုပျက်စီးစေ၊ဒါပေမယ့်အကာအကွယ်မဲ့ -အတိအကျ။ တကယ်တော့:အနှေးလစ္ပိုင္မသာ၊သူတို့ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ချင်တယ်အစ်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်နှောင့်နှေး။ ပင်က်ေနာ္သြားတုန္းကငါငါလွှာ-ဏ-ငါးထက်ပို။ ဒီလူတွေအတွက်အလျင်အမြန်။ ဒါကြောင့်၊အနားယူသင့်ရဲ့ နှင့်ပျော်မွေ့။ အလျင်အမြန်ဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်။ တကယ်တော့:လစ္ပိုင္လုံလုံခြုံခြုံဖြစ်ကြောင်းပေါ်"ကိုစိုက်"ပါ။ ။ ။ ဒီအတြက္သာမတစ္ကိုယ္လံုး ၊ဗီြဒီတိုေ။ သင်သည်ရှိသည်သင့်ရဲ့နှာခေါင်းမှာသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လမ်းပေါ်ဆင်းလမ်းလျှောက်အသတိပွုမိခြင်းမရှိဘဲအသီးအသီးအခြား။ သို့မဟုတ်၊စုသိမ်းမိတ်ဆွေများနှင့်အတူကဖီးအတွက်အထပ် အတွက်ကြည့်ရှု။ ဒါပေမယ့်သင်ရှိပါကတစ်ဦးကဖိလစ်ပိုင်မိတ်ဆွေ၊သင်သည် အတွက်သူ့ကိုညီ ၊ဒါကြောင့်သင်ကြိုက်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးအရုပ်ပုံများ။ အာမခံတရာအချက်အလက်:နေ့အတွက်ဖေ့ကိုချစ်။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သဘာဝတရား၏ဟာသ--အဖေ့ကိုချစ်။ အနက်ရှိုင်း ၊အကျီနှင့်အတူဆိတ်များ၊နွားတွေအတွက်သင်္ချိုင်း၊တတိယ လမ္း"ထူ"လူတန်းစားဘတ်စကက်ဘော၊စွတ်သည်။ တကယ်တော့:လစ္ပိုင္သူတို့ရဲ့သွားတိုက်မှာအနည်းဆုံးသုံးကြိမ်နေ့ဖြစ်၏။ သယ်ဆောင်သွားတိုက်တံနှင့်သွားတိုက်ဆေး၊နှင့်အဆက်မပြတ်သန့်ရှင်းရေး။ သင်ရပ်နေဘို့အလိုင်းအတွက်တစ်နာရီမှငါ့လက်ကိုဆေးကြောနှင့်တိတ်တဆိတ်ပြည့်စုံနှင့်အတူ။ တကယ်တော့:အလွန်အေး-လူ။ ဒါကြောင့်အကြောင်း"အေး"သူတို့ရဲ့ရုံး၊တက္ကစီ၊ဘတ်စ်ကားများ၊ဈေးဝယ်ဖို့တဆယ်ခုနစ်ဂ။ ၏သင်တန်း၊အဥရောပတိုက်မှထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲ(နောက်ကြော်ငြာတွေသုံးဆယ်ခြောက်ဒီဂရီအပေါ်အလမ္း)နှက်၊စီးဆင်းပြီးအပူချိန်မြင့်တက်အဖြစ်၊ဒါပေမယ့်အဖေ့။ ထို့ကြောင့်၊အစဉ်အမြဲ၊အစဉ်အမြဲတည်ပူနွေးသောရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံ။ တကယ်တော့:အဖေ့ကိုချစ်သူတို့ပြုသောအမှု။ ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အဆိုပါသီလ၏အမျိုးသားရေးလက္ခဏာ၊အရာဖြစ်ပါသည်ခံရဖို့ငြူစူနှင့်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသား၊အရာအစဉ်အမြဲနေရာအတွက်နှင့်အချိန်အကြောင်း၊အခြေခံသဘောအရ၊အလုပ်၊အခြေခံအားဖြင့်၊သင်(ထိုကဲ့သို့သောအင့္အ)၊ဖိလစ္ပိုင္အရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အချစ်များဖြင့်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း၊ဒါပေမယ့်မေတ္တာ။ တကယ်တော့:အ အမ်ိဳးသား-ကြက်တိုက်ပွဲတွေ။ အမှုအရာထဲကတစ်ခုငါဘယ်တော့မှနားလည်ဤအစွန်းရောက်တင်းကျပ်အဘို့အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ငါဘဲတက်ရောက်အ ၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပျက်ဖို့အလှည့်အပေါ်အားကစားရုပ်သံလိုင်းတွင်တစ်လှည့်လည်၏ကြက်တိုက်ပွဲများ(ဟုတ်ကဲ့၊သူတို့အပေါ်မှာပြရုပ်သံ)။ နှင့်အသင်သည်အဘယ်သို့သိရကြ။ အသီးအသီးပတ်လည်နှစ်ခုအသစ်ကြက်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကိုယခင်သေသာပထမအကျော့ကနေကွယ်ပျောက်။ တစ်ဦးချင်းစီအဟိတ်တိရစ္ဆာန်မှပူးတွဲဖြစ်ပါတယ်အလွန်ချွန်ထက်ဓါးနှင့်အတွင်းသူတို့ကိုရိုက်နှက်၊မိမိတို့ခေါင်းတိုင်သူတို့စတင်တိုက်ခိုက်တယ်။ တိုက်ပွဲကိုအတိုချုပ်ဖြစ်ပါသည်၊သူတို့တွေဟာသွေးထွက်။ သို့သော်တောင်မှသည့်အခါငှက်နှင့်ငြင်းဖို့တိုက်သူတို့ရဲ့သွေးထွက်သံယိုနွားရိုက်ခေါင်းတိုင်မှီတိုင်အောင်၊သူတို့ပြန်လည်အသိစိတ်နှင့်ရိုက်နှက်စတင်။ တိုက်ပွဲပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံးအမှတ်(ဆိုရင်သူတို့အသက်ရှင်သေး)။ အခုတော့မြင်ယောင်ကြည့်ပါတင်အတွက်ကားဂီယာအပေါ်အဝိုင္း၊သူအဆက်။ ငှက်ရှိပြီးသားသေဆုံး၊ဒါပေမယ့်။ တကယ်တော့:အပေါ်လမ္းသင်တို့ကိုမကြာခဏတွေ့မြင်လူရွေးချယ်ခြင်းအသီးအသီးအခြားခြင်။ ဟုတ်ကဲ့၊ဒီအဖြစ်ပေါ်ပြီးအိန္ဒိယတွင်၊ပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်။ ဒါပေမယ့်အိန္ဒိယအတွက် ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်၊တကယ်တော့၊ဦးခေါင်းခြင်မှပိုင်ထိုက်သောအနိမ့်အ ။ ဒီအခြင်ပင်လှပပြီးကောင်းစွာဆောင်မိန်းကလေးများ။ ဒီဒုက္ခ။ တကယ်တော့:အဖေ့အလွန်ကျယ်လောင်သော။ ပြီးကတည်းကဗမာဘာသာစကားမတူတစ်ကောင်းတဲ့ ၊ကဟန်အကြောင်းသင်တယ်များအတွက်ကြက်ခြံ၊တူရကီ။ ဒါကြောင့်၊ရပ်တည်မှုအတွက်ဓာတ်လှေကား၊သူတို့ကပြောနေတာပါ။ ခံစားချက်ကသင့်ဦးနှောက်ကိုကပ်တစ်လေးညှင်းပွင့်၊နှင့်ထိုအခါ၊ ဒါကြောင့်၊ရမှတ်။ သငျသညျအကြောင်းစဉ်းစား၊အဆုံးကမ္ဘာ၏-အဘယ်သူမျှမ၊ငါအကြံကိုဓာတ်လှေကားသွားတရုတ်။ တကယ်တော့:နှင်းခဲအတွေးမိလာငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူ သာနီ၊တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေ။ ကျနော်တို့ပေးခဲ့သည်ပူနွေးအကျီ၊ဒါကြောင့်လာမယ့်အခန်းမနေရာဖြစ်ပါသည်စွန်းဝက်တိရိစ္ဆာန်များ။ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အတန်းတစ်မိုင်ရှည်လျားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်လာ။ ပြုရန်အမေရိကန်သို့ရေခဲသေတ္တာမပါဘဲတိရိစ္ဆာန်များ။ ရုံကင်မရာ။ နံရံပေါ်မိုဃ်းပွင့်မလတ်ဆတ်သော၊ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအနက်ရောင်ဖုန်အနေဖြင့်ရေခဲ။ သည်ခုံတန်းလျားဆန်နှင့်ဓာတ်ပုံဆရာ။ လူတိုင်းကမင်္ဂလာရှိ၏။ ကု။ တကယ်တော့: ရောင်းသကြားလုံး။ သင်လိုအပ်လျှင်တစ်စာချုပ်စာတမ်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊မစိုးရိမ်ကြ။ မြင် အတူလမ္းအပြင်အဆင်နှင့်အတူစီးကရက်နှင့်သကြားလုံး။ ယခု၊ကြောင်း။ ပေါ်လာ။၊ရွေးချယ်အတွက်နှင့်အတူအကွက်တွေအ ကြောင်းရှာနေကြပြီးသူတို့ကိုမေးဖို့တံဆိပ်ခေါင်းကိုစာရွက်စာတမ်း။ ဒီမှာကြသည်မဟုတ်လောဘ-ထားနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုတံဆိပ်တစ်ခုချင်းစီစာမျက်နှာပေါ်တွင်။ ထိုအခါအပြုံးနှင့်ဆပ်တရာကိုဆက်လက်။ ဒါဟာတကယ့်ကိုတရားဝင်သမားစဉ်။ တကယ်တော့:အမိန့်တော်ထက်မပိုတဲ့အလုပ္၊ေချက်ချင်းအလုပ်မလုပ်။ ကလေးများအတွက်ရှာဖွေနေပြီးနောက်အဟောင်းမျိုးဆက်။ ကလေးတွေကိုမိသားစုအတွက်အနည်းဆုံးသုံး။ တကယ်တော့:အဖေ့အကြောင်းတိုင်ကြားဘယ်တော့မှမ။ ဤအမှုအပေါင်း၊ကျနော်တို့ရှိသည်အဖြစ်"သူအခက်ခဲဆုံး"။ ရင်တောင်သူတို့ဘဝမကောင်းမသင့်ဖြစ်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုဖြစ်လာမှာနေအိမ်၊သူတို့နေဆဲအၿပံဳး။ အားလုံးအချိန်ကိုကျွန်မတစ်ခါသာမြင်တစ်ဖက် ၊သူသည်ဖြစ်နိုင်မယ့်ပဲ။ အၿပံဳးအဆိုးများအားလုံးဒုက္ခဆင်းရဲ။ တကယ်တော့:ဖိလစ်ပိုင်သည်ဗြဟ္မာ။ အဘယ်သို့ငါမကြိုက်ကြဘူးအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ငါသည်အဆဲမငြင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုအလှဆုံးနေရာမြေကြီးပေါ်မှာ။ ထိုကဲ့သို့သောဇာတိအဖြစ်ဒီနေရာမှာအတွက်အိပ်မက်အများဆုံးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအိပ်မက် ဒါကြောင့်ပုံအတွက်မျှော်အိပ်မက်။ဒါဟာသေချာပေါက်တန်ဖိုးရှိတစ်ဦးကကြည့်ဖို့သွားရောက်လည်ပတ်အားလုံးကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လုပ်သင့်ထက်ပိုကောင်း၊ထိပ်တန်း-လေးအချက်အလက်အကြောင်းဖိလစ်ပိုင်.
သငျသညျကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင်၊ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း၊ဝန်ထမ်းများ၊အိမ်ရှင်၊သို့မဟုတ်အလုပ်လက်မဲ့၊သင်ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြောစကားအနည်းငယ်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်အတွက်အောင်မြင်ဆြးေႏြးေ။ ပြီးဖို့အဓိကသော့ချက်သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှု၏အသိပညာအ။ ဘီဒါပေမယ့်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးငါတို့စာဖတ်သူတွေ။ လျှင်သင်ပြီးသားတစ်ဦးကျောင်းသား၏၊သင်အသုံးပွုနိုငျအလွန်ပစ္စည်း၊ကိုယ့်ကိုပြန်လုပ်ပါနှင့်ဆမ်း။ ကျနော်တို့မိတ်ဆက်ဖို့တစ်စီးရီးများ၏အကြံပြုချက်များ၊အသိသောစိတ်မပျက်မည်မဟုတ်သင်မှာပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုကောင်းတစ်ခုတျစှဲ။ ငါ၏နာမကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့သင်တန်းပေးလိမ့်မည်ကိုကူညီသင်သည်သင်၏ပါးစပ်နှင့်မှန်ကန်သောအားလုံးအမှားတွေအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားနှင့်။ မှတ်ပုံတင်ရန်အမြန်ဆုံးများအတွက်သင်တန်းများမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ။ လေ့လာသင်ယူနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်အတူ။
ဒါဟာမဖြစ်အောင်ဆန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်အမျိုးသားများအဘို့အကြောင်းပြောရန်အကျွမ်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမပါဘူး။ သို့သော်အမှန်တကယ်၊ဂရုတစိုက်စဉ်းစားပါ။ ကလပ်အသင်းများမှာအများအားဖြင့်ဆင်မခြင်ငယ်အသက်ရှင်သူသည်လူများအတွက်အိမ်တအိမ်ကိုပိုက်ဆံဖြုန်းနှင့်။ ထို့အပြင်၊ဒါကြောင့်အများကြီးအရက်၊နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဆေးဝါးများအကြောင်း၊သင်သည်ကြောက်လန့်ဖြတ်ကူးဖို့အတံခါးခုံ၏ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်း။ သင်တန်း၏၊ဤကိစ္စတွင်မကနေရာတိုင်း၊ဒါပေမယ့်အတော်လေးဘုံဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊တစ်ချိန်ကတစ်ဂုဏ်သရေရှိတဲ့ယောက်ျားသွားရန်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ကတမ်းဖြစ်သည်ဟုမဟုတ်သူ့ကိုအဘို့လုံလောက်တဲ့။ အဲလည်းအများကြီးလိမ်လည်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ဘယ်အကြောင်းအာမခံအဘို့အရက်စွဲ၏အမည်များအတွက်မိန်းကလေးများရုပ်ပုံ၊အပြင်းထန်ကြီးထွားလာလူငယ်မိခင်များ၏သားသမီးလေးယောက်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်သုံးနှစ်အတွက်တပ်မတော်? အဲဒီရဲ့သာရန္ျမယ္။ င့်အဘယျသို့ပေါ်မှာ၊သင်မယ်ပြောနေတာ။ ဒါကြောင့်အတူအစည်းအဝေးမှာမိန်းကလေးလမ္း။ မဟုတ်ရှိသမျှလူဆုံးဖြတ်သွားဖို့သူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ယခုအခါ၌အလျင်အမြန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်သို့မဟုတ်ပဲလမ်းလျှောက်အတွက်ဂုဏ်ယူညျး။ အမှုများစွာအတွက်၊ဤအချက်ကြောင့်အဆိုပါအားကောင်းလိင်သည်ကြောက်ခံစားရရန်ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်ထောင်လွှားလုံလောက်တဲ့များမှာ၊ ပိတ်ဆို့ရန်အများဆုံးများ၏အလိုဆန္ဒမှဆက်သွယ်ပြောဆို။ ဒါကြောင့်ပထမအဆင့်အစည်းအဝေးမိန်းကလေးတစ်ဦးအပေါ်လမ္းကကိုကျော်လွှားရန်အသင့်ဝှက်ထား၏ကွောကျရှံ့။ ဘူးလက်မခံငြင်းပယ်၏။ ဒါဟာအတော်လေးဖြစ်နိုင်ကြောင်းသင်သတိပြုမိကြပြီအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဘယ်သူသည်ပြီးသားလူကြီးလူကောင်း။ ဒါ့အချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ရဲ့အကြမ်းမဖက်လော၊ကြောက်နေကြတယ်အမျိုးသားများအတွက်စိတ်ဝင်စားနေသောသူတို့ကို။ သို့သော်အဘယ်လျှင်သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာအနည်းဆုံးမှာကောင်းသောအရာတစ်ခုခု? ပေးထားသောဤစိတ်သက်သာအခြေအနေ။ နားလည်ရန်မည်သို့ဖြည့်ဆည်းဖို့မိန်းကလေးများလမ်းပေါ်မှာ၊သင်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်အကဲဖြတ်ဖို့သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်။ ဒါဟာရမည်ဖြစ်ပြီးသန့်ရှင်းသပ်ရပ်သည်။ မှာကြည့်ပါ။ အလွန်မကြာခဏအမျိုးသားများအငြင်းဒီကွက်၊ဒါပေမယ့်အချည်းနှီး။ တစ်ခါတစ်ရံညစ်ညမ်းသော၊မစင်ကြယ်သောဖိနပ်နိုငျခြောက်လှအမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင်ပင်၊ဒါကြောင့်တကယ်တူလှပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမအကြိုက် ။ မမြဲကြဖို့လမ်းပေါ်ဆင်းလမ်းလျှောက်အတွက်ဝတ်စုံ။ သင်ဟာကိုယ့်ရန်လိုအပ်သည်အနီးကပ်ကြည့်မှာပါ။ ငါသည်မပြုဖို့ဘယ်လိုသိအပေါ်အလမ္း။ အမှန်တကယ်တော့၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးတွေအများကြီးရိုးရှင်းတဲ့သင်ထင်ထက်။ သင်ဟာကိုယ့်ရန်လိုအပ်သည်ဂရုတစိုက်လေ့လာခြင်း အမျိုးသမီးရဲ့တုံ့ပြန်မှု။ အတိုးချက်ချင်းမြင်နိုင်။ ဒါေပမယ့္အ ကြိုးစားနေသည်များဖယ်ရှားပစ်ရရန်သင်အတွက်အလျင်အမြန်ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများ၊နှစ်သက်စောင့်ရှောက်ဖို့တပြင်လုံးကိုလျှို့ဝှက်မေးခွန်းနှင့်မတုံ့ပြန်အဖြေများကိုသာသူတို့၏စကားသည်၊ဒါကြောင့်ပိုကောင်းတယောက်တည်းသူမ၏စွန့်ခွာ။ အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ခံရဖို့ကျန်ရှိနေသော၊အဘယ်သူမျှမလေးမြတ်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။ မဆိုအမှု၌၊ကြိုးစားဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမိန်းကလေးတစ်ဦး။ မူရင်းနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်မတင်ကပ်။ အမြဲအစီရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြင်ဘက်မှ။ ဒီစေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူနားလည်ရန်အဘယ်သို့ပြောသောအခါ၊ဒါကြောင့်အတိုင်းမမောင်းခြင်း။ တစ်ဖန်ပြန်သတိရကြောင်းမကြာသေးမီကသင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်အနီးတွင်အလွန်ဂရုတစိုက်။ ဤသည်ပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းပံ့ပိုး။ အယူကိုစွန့်ပစ်ရာ၊ေငြ၊ကျေးတံခါးကိုဖွင့်လှစ်။ သင်သည်လည်းအကြံပြုတင်ဆောင်လာသောလေးလံအိတ်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာအလမ်းပေးစေခြင်းငှါအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ များသောအားဖြင့်ဤအခြေအလွယ်သိမှရရန်အသီးအသီးအခြား၊မရိပ်အဖြစ်သံသယဖြစ်ဖွယ်လာလျှင်ကိုယ့်အဘို့အမိန်းကလေး။ ထို့အပြင်၊ ပြုမူမြဲဆွဲဆောင်ကောင်းလိင်။ အဲဒါကြောင့်သူတို့ထဲကအနည်းငယ်ကသာဤသည်နေ့ရက်ကာလ တကယ့်လူကြီးလူကောင်း။ သာရှာ၏မေးခွန်းကိုဖြေတစ်ခု၏အမှတ်မပြုဖို့ဘယ်လိုတစ်မိန်းကလေးအပေါ်လမ္း။ သင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်။ ကောင်းစွာသက်သေပြချက်အစွန်အဖျား:အချီးမွမ်းဖို့အတြင္းသင်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုမိုသာယာသော။ ဒါပေမယ့်သတိရ၊။ မှလာသောသူသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်အဘို့ရှာသင်ချက်ချင်းဖယ်ရှားပစ်ရရန်အခက်ခဲဆုံး။ ရုံမင်နဲ့ဇွဲ။ တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်၊နှင့်မိန်းကလေးများမကြိုးစားအာရုံစိုက်ဖို့သူတို့ကို။ ဒါကြောင့်သင်သည်မပြုလျှင်သိရန်မည်သို့အပေါ်အလမ္း၊သဘာဝကျကျပြုမူနှင့်အငြိ။ လက်ျာစကားအမည်လွှဲမရှောင်လာကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်တက်။ နှင့်အပြုံးများ၊အမျိုးသား၊အၿပံဳး။ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့။
နောက်ဆယ်နှစ်ထောင်၊သုံးနှစ်၏အားလပ်ရက်များ၊နှင့်အမွေးကလေးတစ်ဦး၏၊ သဘောပေါက်ကြောင်းပြီးလိုအပ်သာ။ သူမအားလပ်ရက်သွားလေ၏တစ်ဦးတည်း၊ယောဂ၊ကိုယ်တိုင်ကင္း၊နှင့်နေဆဲပြီးလိုအပ်။ သူမဤမျှလောက်သောစွမ်းအင်။ သိပ်ချစ်။ သူမမငြင်းဆန်၊အိမ်တွင်ထိုင်နေသောနှင့်စောင့်ဆိုင်းနေသည်သူမ၏ခင်ပွန်းအဘယ်အရာကိုထုတ်တွက်ဆသူမလို။ ထို့နောက်ဒေးသို့ရောက်သူမ၏ဘဝကိုစတင်ခဲ့သည့်ကိစ္စ။ အထီးကျန်၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏၊အိမ်ကခင်ပွန်းသည်တီဗွီကြည့်ခြင်းနှင့်အသည်းအသန်ကြိုးစားနေသည်စကားစတင်။ တနင်္ဂနွေအပေါ်အ၊သင်လိုချင်တာတောင်းဖို့သူ့ကိုထွက်ပြီးမှတစ်ဦးကရုပ်ရှင်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုနေစဉ်သူစစ်ဆေးမှုများမိမိအီးေမး ဖုန်းပေါ်မှာစကားပြောဖို့တစ်စုံတစ်ဦး။ ပြီးလျှင်အရွက်အချိန်တစ်ဝက်သို့မဟုတ်အသုံးျအိမ်မှာနှောင်းပိုင်းမှာညဉ့်၊အမျိုးသမီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်အထီးကျန်ဆန်။ ခံစားအကြားချိတ်ဆက်။ သူသည်ကျွနု်ပ်၏အနီးလူတစ်ဦးအတွက်သူမ၏အသက်၊ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမိတ်ဆွေကောင်းတစ်ဦးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်သူမ၏အစ်ကိုရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ။ ခင်ပွန်း၏အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသူတို့မယားရုံသာမကပါဘူး။ သူတို့သည်သင့်ထံသို့ပြန်လာအချို့သောယဉ်ကျေးမှုနှင့်မယူင်းတို့၏ဇနီးများအတွက်ခွင့်ပြု။ ထိုဆန္ဒများ၏အားလုံးအမျိုးသမီးရှိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်။ အဘယ်သူမျှမနှင့်အတူပျော်ရွှင်သူဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှဝင်ပါတီနှင့်အေက်ာင္းသူမ၏ချီးမွမ်းစိတ်ရင်းမှန်ရှိပြီးအလွန်ကြီးစွာသောစကားလက်ဆုံနှင့်အတူသူ၏အနုစိတ်ကို၊သင်သေချာမည်သူ့ကိုလက်လွတ်။ ဒါကြောင့်မဖြစ်စေခြင်းငှါသို့မဟုတ်တော်တော်ပြည့်စုံရေရှည်မှာအတွက်၊ဒါပေမယ့်ကြီးမြတ်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးစကားပြောဆို၊နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်စုတ်။ စဉ်းစားခြင်းဖြင့်စတင်ပါ၊"ကျနော်လိုအပ်တဲ့သူတစ်ယောက်ရယ်ဖို့ဆွဲဆောင်။"ခင်ပွန်းတစ်ခါတစ်ရံဖြုန်းဖို့ရှိသည်သည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နေ့နှင့်အတူသူတို့သားသမီး။ တနင်္ဂနွေညနေခင်းနှင့်အတူသင်တို့၏မယားများ၊အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သူတို့နှင့်ထွက်ကြိုးစားနေအသစ်အတွက်အမှုအရာအိပ်ရာကိုပြသရန်ပဲဘယ်လိုပြင်ဆင်။ နို့တိုက်ကျွေးအားလုံးအမျိုးသမီးအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်၊သူမ၏ခင်ပွန်းငွေပေးချေသူမ၏အနည်းငယ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးသူမ၏ခံစားချက်များ၊သဘောတူလိမ့်မည်ဟုမလွှဲမရှောင်နေရာယူ။ အမျိုးသမီးများကိုမွေးပညာရေးနှင့်အလုပ်ပေါ်မှာအများကြီးထိုနေ့သောအခါသူတို့၏ခင်ပွန်းများအတွက်သူတို့ကိုယူခွင့်ပြု။ သူသည်ယူထိန်းချုပ်ယူမှသူမ၏ဂရုစိုက်၊သူတို့သူမ၏နှလုံး။ ခင်ပွန်းတကယ်ဂရုစိုက်သူတို့ရဲ့ဇနီးအားဖြင့်သူတို့ကိုကူညီနှင့်အတူသူတို့သား၊သူတို့စားသည့်အခါသူသည်မချက်ပြုတ်ချင်၊နှင့်စစ်ဆေးနေအတွက်မှာတနေ့လုံးဆီသေချာအောင်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။ မြင့်မားသောမူများအပြားရှိပါတယ်သောသူအမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ရုံးသို့မဟုတ်နှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက်ဖန်တီးမှု။ ့ကြောင့်၊ထောက်လှမ်းရေး၊လိမ္မာပါးနပ်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးဆွဲဆောင်။ အများဆုံးယောက်ျားဖို့ငြင်းဆန်ကြောင်းပြောဆိုပေါ်မယ့်အရာကိုသာသူတို့၏အလုပ်ခွင်၊အကြောင်းပြောဆိုသူတို့မည်သို့ခံစားရ၊ သူတို့ကြိုက်တတ်တဲ့အလျှင်းပြုပါရန်အိမ်တော်ပတ်လည်၊ဟုသူတို့တွေဟာ"ပန်း"။ ဒီအပျင်းစရာဖြစ်လာသည်အတွက်ဇနီး၊သူနောက်ဆုံးမှာလိမ့်မည်ရှာဖွေနေစတင်ရန်များအတွက်နယူးအမျိုးသားများ။ ပြီးလျှင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းတွေ့င္စား၊ခံစားရသည်ဤအကြောင်းများကြောင့်သူမ၏ဖန်တီးမှုစွမ်းအင်နှင့်တစ်ဦးပုံပြင်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲပျင်းစရာဒီနေ့ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ဒါကြောင့်အရေးအကြောင်းခင်ပွန်းရှယ်ယာများနှင့်အတူသူ၏ဇနီးနှင့်အစဉ်အမြဲပြောပြသူမ၏အပြုသဘောအကြောင်းသူ။ ငွေ၊အာဏာ၏အချို့သောယောက်ျားအဖြစ်၊၏အလယ်၌။ သက်သာနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားရာအားလုံးကိုလိုအပ်သောအလုပ်ကိုသွားဖို့လုံလောက်တဲ့ငွေရှာနှင့်ပြန်ပေါ်ချိန်။ ဘဲနာမ်ား၊အကျိုးစီးပွားနှင့်ရည်မှန်းချက်များ၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနိုင်ညှိုးနွမ်းကြကုန်အံ့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအောက်ဆုံးမှနစ်သည်။ အမျိုးသမီးသည်လူကိုဆွဲဆောင်ဖို့စီစဉ်နေသူတစ်ဦးပိုငွေရှာ၊စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ရွှေ့ဖို့လိုလား။ သူမသည်ပင်ဖြစ်လာရန်လှုံ့ဆော်သောအခါဤပုဂ္ဂိုလ်မေးသည်သူမ၏အမြင်ပြီးတော့အတတ်သို့အလေ့အကျင့်။ ဆိုရင်သူမအတွက်ပြီးသားဏာ၊သူမခံစားရတဲ့အလင်းခါ အရေးပါတဲ့လူကြီးကိုတွေ့။ ခင်ပွန်းသတိရသင့်တယ်အဘယ်ကြောင့်၎င်းတို့၏ဇရွေးချယ်သူမ၏ပထမဦးဆုံးအရပျ၌၊နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုဤညွှတ်မှုနှင့်ရည်မှန်းချက်။
ပျမ်းမျှဥရောပ၊စိတ်ကူးဖို့ခဲယဉ်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သောအမျိုးသမီးများစွာအိန္ဒိယတွင်ဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည်ဖို့ဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအိန္ဒိယအမျိုးသမီးများရရှိခဲ့တာပိုအခြင့္အေရး၊ပိုပြီးအမျိုးသမီးအိန္ဒိယအတွက်ယူပြီးရာထူးတက်တာဝန်ကြီးများအတွက်အလုပ်လုပ်အုပ်စုများ၊သို့သော်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်တံခါးပိတ်သာဖြစ်ပျက်ဖို့အစု။ သတ်ဖြတ်သည်၏အစဉ်အလာသေဆုံးတဲ့မိန်းကလေးအစဉ်အလာအိန္ဒိယအတွက်။ ကလေးတစ်ဦးကဲ့သို့အ၊သူမကအတွက်နစ်၊နို့သူမ၏ဧည့္ခန္းကိုယ်ခန္ဓာကိုမီးရှို့သို့မဟုတ်အဆိပ်။ ဒီ"အစဉ်အလာ"တစ်ခုရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပြီးအိန္ဒိယအတွက်အဘို့နှင့်အများအပြားမိသားစုများ"၊"။ တယောက်သောသူမှမွေးဖွားခြင်းကိုပေးတဲ့ကလေးမွေးဖွားခြင်းပေးတော်မူရန်မလို။ နေ့တိုင်းအတွက်အိန္ဒိယက အမျိုးသမီး ။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်အတူအသစ်နည်းပညာများမကြာသေးမီကာလ၌၊ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှလေ့လာဖို့အမျိုးသမီး သုံးပြီးအလွန်အစောပိုင်း-အယ္လ္ထ။ ဒီခွင့်ပြုစနစ်တကျသတ်ဖြတ်မှုသောကမိန်းကလေးများ။ ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ဖြစ်ကောင်း၊ အမှန်တကယ်အသွားမထား။ အမျိုးသမီးရဲ့။
ဂ်ဴပီးျမင္ပါေစ။ ထိုသူတို့အထဲမှအနေနဲ့အိန္ဒိယကမိသားစုအတွက်အိမ်တအိမ်ကြီး။။ ၏သမီးကိုပြောပြလီယို အများအပြားရှိပါတယ်ပုံပြင်များအကြောင်း။ ပါတီအတွက်အိန္ဒိယ၊လူတွေဟာအမှန်တကယ်အခရစ္စမတ်။"လီယိုသိတယ်။ဟုတ်ကဲ့၊ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကဟုခေါ်သည်' တိ'နှင့်ဟုဆိုလိုသည်'ေန'၊"ပြန်ကြားချက်။ သာသူတို့ကိုမိမိလူမျိုး၏ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း။ သို့သော်လူသန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်အတွက်အိန္ဒိယ:"အလှဆင်အပင်ရှိပါသည်၊လွန်း။ဂ်ဴမေးပြီးချာ။ အ မိသားစုကြိမ်လာသွားသူတို့ရဲ့အဘိုးအဘွားအတွက်အိန္ဒိယတိုင်းတစ်နှစ်အတွက်ခရစ္စမတ်:"ကောင်းပါပြီ၊ဒါပေမဲ့ကျွန်မဘိုးဘွားမကိုအလှဆင်၊ဒါပေမယ့်အရက်သို့မဟုတ်ငှက်ပျောပင်။ သူတို့အပေါ်မူတည်ရောင်အလင်းအပြင်၊"ပြန်ကြားချက်။ ဒီဇင်ဘာလ၌အိန္ဒိယကျင်းပခရစ္စမတ်၊အမြန်ဆုံးနှင့်အတူသန်းခေါင်စုလိုက်အပြုံလိုက်။ ဒါကြောင့်သူတို့လို ဖို့လူတွေကိုတွန်းအားပေး။ ဆိုလိုတာက"ရွှင်လန်းသောခရစ္စမတ်။ခရစ်စမတ်မှာ၊တမိသားစုလုံးတို့ကိုစုဝေးများအတွက်ညစာ၊ ဆက်လက်:"ကျနော်တို့ထိုင်နေကြတယ်အပြင်ဘက်အပေါ်ကြီးမားတဲ့ပြဲ။ အဲဒီကြောင့်အိန္ဒိယသည်ပူနွေးအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံး။ ညစာစားအဘို့၊ငါတို့သည်အများသောအားဖြင့်ဟင်းဟင်း၊ဆန်၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသား"၊ညဦးယံ၌တစ်ကြီးမားတဲ့မီး။ အမှန်တကယ်၊ငါသည်စောင့်ဆိုင်းနေ၊ပိုပြီးနှင့်အတူ စိတ်မရှည်။"ငါ့အဖွားပေးသည်အဖိုးအတူလက်ဆောင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း:သံပုရာ၊"ေျပာနှင့်အတူရယ်။"သံပုရာပေးတော်မူသည်အိန္ဒိယအတွက်အကြီးအကဲ၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုအဖြစ်ဆည်းကပ်။"အများစုမှာအိန္ဒိယလူမျိုးပွဲတော်၊သို့သော်ထိုသို့မဟုတ်ပါ၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့များမှာ။ ဗုဒ္ဓသည်အိန္ဒိယဘာသာ၊လူ၏ဘဝနှင့်အစဉ်အဆက်-ဧည့္ခန္းဏယုံကြည်ခြင်း:"ပွဲတော်၏အလင်းပေါ်လာ"နှင့်ကြာလေးယောက်နေ့ရက်ကာလအဘို့။ ရှိပါတယ်အနည်းငယ်ဆီမီးခွက်နေရာတိုင်း၊ဖယောင်းအပေါ်အပြတင်းပေါက်များနှင့်အိမ်ခေါင်မိုး။ ချိတ်ဆက်ရန်လူနှင့်အတူနတ်ဘုရားမ၏ကံဇာတာ၊လမ္းင်းတို့၏နေအိမ်များမှ။ အဆိုအရအဟောင်းဒဏ္ဍာရီလာသာလူ၊ကံ၊နတ်ခိ၊သူတို့အိမ်များနှင့်အတူအလှဆင်အလင်းအိမ်။ ဒီအဘယ်ကြောင့်အများအပြားအိန္ဒိယလူမျိုးဝယ်တစ်ဦးအပိုဆောင်းထီလက်မှတ်အပေါ်ဒီနေ့။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊အကံဇာနှုတ်ခွန်းဆက်။ အခြားအရက်လုံးဝကျိန်မိသားစု။ စားအတူတူ၊ကလေးတွေအရတင်ဆက်။"အို၊ကြီး၊ကျွန်တော်ပြောပြသင့်တယ် ။ အကြောင်း။"။။။သူမတူပျော်ရွှင်လီယိုသူမဆုံးရှုံး။"။"အခုခ်ိန္မွာေတာ့သူမ၏ပခုံးကျော်နောက်တဖန်အ။"
မီဖွင့်စာရင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများအမျိုးသမီးများညွှန်ပြသင့်ရဲ့ကျားမ၊သင်မေးရန်လိုအပ်ပါတယ်အနည်းငယ်မေးခွန်းများကို။ ဤအများအပြားမိန်းကလေးငယ်များအပူတပြင်းများမှာတစ်ခုတည်းမိခင်သို့မဟုတ်ကျေနပ်မယား။ လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသဘောတူ။ ဤအမျိုးသမီးကိုမရှာဘူး"ခူ"။ သူတို့သာလိုမြန်ဆန်ပြီးလိင်။ သူတို့သဘောတူရန်ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုချက်။ အခုဆိုရင်သင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်စာရင်းဖွင့်လှစ်"ဓါတ်ပုံအမျိုးသမီး၏နောက်တံခါးကို"။
Ысулдары, был ай ҡатын-ҡыҙ уларҙы белергә тейеш
လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့ဗီဒီယို ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေ ဗီဒီယိုချက်တင်၏အနှစ် ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးမိတ်ဆက် ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အြန္လိုင္း ကြော်ငြာအမျိုးသမီးနှင့်တွေ့ဆုံ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ နှစ် စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ချက်တင်ကစားတဲ့ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့မရှိပါ အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့အခမဲ့ဗီဒီယို